Ama-7 ama-Chakras Womzimba Wethu we-Etheric - u-Edwin Van Der Hoeven
Ama-chakras we-7 womzimba wethu we-etheric
Agasti 26, i-2019
Ukuzindla kwe-Chakra resonance
Kuleli khasi uzojwayelana ne-7 chakras yomzimba wethu we-etheric nezwe elikhethekile le Ukungena kwe-Brainwave kuhlanganiswe nesikhumba se-Chakra. Kwi-chakra ngayinye kunesixhumanisi sokuzindla kwe-resonance lapho ubuchopho bakho buvuselelwa khona ukwenza amaza we-Alfa amaningi ukuze ukwazi ukuzindla kalula.
Faka unhlokweni ukuze uqale ukukhiqiza uhlu lokuqukethwe
Chakra (Pali: chakka, iTibetan: khorlo, isiMalay: cakera) yigama elivela emasikweni endabuko / enkolweni yamaNdiya ezindaweni zomzimba wamandla womuntu okuthiwa ubalulekile embuthweni wabo wokuphila ngaphakathi kwalelo siko. I-Chakra (Sanskrit cakram) isho isiyingi noma isondo.
Umqhele we-chakra - ubunye naphezulu
I-Sahasrara (umqhele chakra) ihlobene nengokomoya nokukhanyiselwa. Le chakra yesikhombisa iphathelene nokuphishekela imibuso ephakeme yokwazi. I-chakra yesikhombisa evulekile idala umuzwa wokuthula okujulile nobumbano, ngaphezu kobukhulu. Lokhu kuholela ekuhlangenwe nakho kwenjabulo ephelele futhi kusungula ukuxhumana okuyiqiniso elingaphezu komcabango. Amandla ale chakra angaholela ekutholakaleni kweMahatma, "umphefumulo omkhulu." Ngokusho kweNew Age le chakra inombala ogqamile.
Oda ukuzindla komqhele we-chakra resonance manje
Okwesithathu iso iso - umuntu omsulwa
I-Ajna (yeshiya yesithathu yeso) inikeza ukunakwa nokuqwashisa njengesikhungo esingokomoya. Isibonakaliso esibalulekile se-chakra yesithupha nguShakti Hakini, unkulunkulu ophambili, omelele isici sobudoda nobesifazane (ukujula kuyadlula). I-Ajna chakra (ebizwa nangokuthi yi-yesra yesra yesithathu), ngokusho kwe-New Age indigo, ibala futhi ihlinzeka ukuxhumana emhlabeni wokomoya futhi ivule amasango elwazini olunembile futhi ibhekisele kwangempela elivelayo lapho nje umbono wezinto ezimbili oqondile Umhlaba wedlulile nemicabango ihlale phansi. Ngoba i-chakra ebunzini ithinta ukusebenza kwawo wonke ama-endocrine gland, kubalulekile empilweni.
Oda ukuzindla kweson revonance yesithathu manje
I-Throat chakra - ukuzwa okusobala
I-Vishuddha (umphimbo chakra) yakha isikhungo somsindo nokukhuluma emzimbeni. I-chakra yesihlanu (ebizwa nangokuthi i-koo chakra) inombala oluhlaza okwesibhakabhaka ngokusho kwe-New Age futhi ixhumanisa isikhungo senhliziyo nge-chakra yangaphambili futhi ibhekwa njengemlamuli phakathi kokuzwa nokucabanga. Le chakra ibaqondanisa nomunye futhi iqinisekisa, ngokwesibonelo, ukuthi isilinganiso asitholi isandla esiphakeme.
Oda ukuzindla komphimbo we-chakra resonance manje
I-chakra yenhliziyo - umuzwa osobala
I-Anahata (inhliziyo chakra) ixhumanisa ama-chakras amathathu aphansi wemvelo ngenhla yama-chakras amathathu aphezulu, ukwazi komuntu. Le chakra iluhlaza ngokusho kwe-New Age futhi ilawula ukusebenza kwenhliziyo, amaphaphu nokuphefumula. Ukujikeleza kwegazi okuzinzile, inhliziyo eqinile, isigqi senhliziyo esinempilo nokuphefumula okujulile, okuvuselela umoya kukhombisa ukuthi i-chakra yenhliziyo ilingane.
Oda ukuzindla kwe-chakra resonance manje
I-Solar Plexus - umbono osobala
IManipura (inkaba chakra) ibonwa njengendawo ebaluleke kakhulu yokugcina amandla. Ngokusho kweNew Age le chakra iphuzi ngombala futhi ihlotshaniswa namanyikwe, isisu, i-gallbladder, isibindi, umgogodla, amathumbu amancane, isisu sesisu nohlelo lwezinzwa oluhlwabusayo. Le chakra ilawula ukugaya futhi inomthelela omkhulu ekusebenzeni komzimba ophansi, isisu, isibindi kanye nomqolo.
Oda ukuzindla kwe-solxus ye-solar chakra resonance manje
I-Sacral chakra - izivivinyo ezicacile
ISwadhisthana (sacrum chakra) iwolintshi ngombala ngokusho kwe-New Age futhi ixhumeke kwindlala yocansi, isitho sangasese sowesilisa, isitho sangasese sowesilisa, izitho zangasese, isinye, isistimu yokujikeleza kanye nokuphathwa kwamanzi.
Oda ukuzindla kwe-sacral chakra resonance manje
Root chakra - iphunga licacile
IMuladhara yayizokwenza ukuxhumana phakathi komzimba, umhlaba nendlela ohamba ngayo emhlabeni. Ngokusho kweNew Age, i-chakra yokuqala ibomvu ngombala futhi ihlobene ngokomzimba nezinkinga ezinomhlane ophansi, ikholoni, amathambo, okhalweni, i-pelvis kanye namabhuthi.